Maka: ixabiso lesindululo | Martech Zone
Maka: ixabiso lesindululo
NgoLwesihlanu, Novemba 27, 2020 NgoLwesihlanu, Novemba 27, 2020 UOliva Saikia
Ukuze uphumelele kwaye uphile kwishishini, abanini bamashishini kufuneka bamkele uninzi lweendlela kunye namaqhinga. Isicwangciso sokugcina abathengi sibaluleke kakhulu kuba sisebenza ngakumbi kunaso nasiphi na isicwangciso-qhinga sentengiso xa kufikwa kunyuso lwengeniso kunye nokuqhuba imbuyekezo kutyalo-mali lwakho lwentengiso. Ukufumana umthengi omtsha kunokuxabisa amatyeli amahlanu kunokugcina umthengi okhoyo. Ukunyusa ukugcinwa kwabathengi nge-5% kunokunyusa inzuzo ukusuka kuma-25 kuye kuma-95%. Inqanaba lempumelelo lokuthengisa kumthengi
Uyiphucula njani iNgcaciso yeXabiso eliKhulu
NgoMgqibelo, ngoJuni 9, 2018 NgoMvulo, nge-17 kaDisemba ngo-2018 Douglas Karr
Elinye lamadabi endisokola kuwo kunye neenkampani kukuyeka ukucinga malunga nezinto abazenzayo kwaye baqale ukucinga malunga nokuba kutheni abantu besebenzisa imveliso okanye inkonzo yabo. Ndiza kukunika umzekelo okhawulezayo… usuku nosuku, uyakundifumana ndirekhoda kwaye ndilungisa ii-podcast, ndibhala ikhowudi yokudibanisa, ndiphumeza izisombululo zomntu wesithathu, kwaye ndiqeqesha abathengi bam. Blah, blah, blah… ayisosizathu sokuba abantu benze iinkonzo zam. Banokufumana nayiphi na kwezi nkonzo kwiFiverr kwifayile ye-
Ukuthengisa iiBuzzwords ezivela kuMashable
NgoMgqibelo, ngoMeyi 25, 2013 NgoMgqibelo, ngoMeyi 25, 2013 Douglas Karr
Abantu eMashable babeke ndawonye le infographic kwiintsuku ezingama-30 zeNtengiso yeBuzzwords. Njengomntu ongakwaziyo ukuma kwintengiso, ndiyasoloko ndixabisa xa sijonga intengiso ye-BS. Ndinyanisekile, nangona kunjalo, kwaye ndiyavuma ukuba ndicinga ukuba le infographic isenokugcwala kuyo. Imigaqo enje ngentengiso ye-agile, i-infographic kunye ne-gamification ayithengisi ii-buzzwords, ngamagama okwenyani ekufuneka wonke umthengisi awazi kakuhle. Kwaye inkulu yam
Ungawubhala njani umxholo apho iindwendwe zichonga ixabiso lakho
NgeCawa, ngoMatshi 3, 2013 NgeCawa, ngoMatshi 3, 2013 Douglas Karr
Nokuba liphi ixabiso, ixabiso lihlala limiselwa ngumthengi. Rhoqo, elo xabiso liya kuxhomekeka ekubeni umthengi uyisebenzisa kakuhle kangakanani imveliso okanye inkonzo yakho. Uninzi lwesoftware okanye inkonzo (i-SaaS) abathengisi basebenzisa ukuthengisa okusekwe kwixabiso ukumisela amaxabiso abo. Oko kukuthi, endaweni yokuxabisa ireyithi ethe tyaba yenyanga okanye ireyithi esekwe ekusetyenzisweni, basebenza kunye nomthengi ukumisela ixabiso elinokubonelelwa liqonga emva koko basebenzele ukubuyela kulo